The Legend of Zu ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး ~ Myanmar Asian TV Channel
The Legend of Zu ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted by Myanmar Asian TV Channel with 14 comments
MMATV Channel ရဲ့ Fan တချို့ တောင်းဆိုချက်အရ တရုတ်သိုင်းကား တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် .... အပိုင်း ၅၅ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး တစ်ခုပါလို့ ပထမဆုံးအာမခံပါရစေ ... မင်းသား မင်းသမီးတွေကလဲ နာမည်ကြီးဆိုရင်လဲ မှားနိုင်မည်မထင်ပါဘူး ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ - နတ်ဆိုးလောကမှာ သခင်လေးရဲ့ အချစ်ခြင်းကိုခွဲခဲ့ တဲ့သူက သန့်စင်တယ်ဆိုတဲ့ဇူးဇန်းဂိုဏ်းချုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့ .... နတ်ဆိုးသခင်က လောကမှာ မှော်စွမ်းအင်ကိုလက်ခံနိုင်မယ့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ဇူးဇန်းကိုပို့ခဲ့တယ် .... မှော်စွမ်းအင်ကိုနိုးဆော်ပေးဖို့ ကောင်လေးရဲ့ဇနီးရုပ်နဲ့တူနေတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် ... အဲ့လို အရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ အချစ်အမုန်းကလဲစားချေတာကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး ...
မှော်လောကရဲ့ သခင်အဖြစ် မင်းသားချော (Chinese Scarlet Heart ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသား) Nicky Wu သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ... မှော်စွမ်းအင်ကိုလက်ခံမယ်သူနေရာမှာတော့ William Chan က သရုပ်ဆောင်ကာ .... မှော်ဓာတ်ကိုနိုးဆော်ပေးမယ့် သူနေရာမှာ (The Journey of Flower ဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ) Zhao Liying တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ....
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 7.9/10 ရရှိထားပြီး Viki မှာတော့ 8.9 ရရှိထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး ... drama တွေ ကြည့်ရတာ ရိုးအီလာတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ရော သိုင်းလောက မှ ကိုကို မမ များအတွက်ရော ရှေ့ထားပြီး '' The Legend of Zhu '' ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ကို ပိုင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ...
Episode 1 (V.I.P Link) Episode 1 (pcloud Link)
Episode2(V.I.P Link)
Episode2(pcloud Link)
Episode3( pcloud Link)
Episode4(pcloud Link)
Episode5( pcloud Link ) Episode6( V.I.P Link )
Posted in Adventure, China, Drama, Fantasy, Historical, Wuxia
SUBTITLES MOVIES FREE VIDEOSOctober 8, 2016 at 8:26 PMနောက်ပိုင်းလေးလုပ်ပါအုံဆရာReplyDeleteSUBTITLES MOVIES FREE VIDEOSOctober 8, 2016 at 8:27 PMနောက်ပိုင်းလေးလုပ်ပါအုံဆရာReplyDeleteSUBTITLES MOVIES FREE VIDEOSOctober 11, 2016 at 9:09 PMဆရာအပိုင်းလေး၃လုပ်ပါအုံReplyDeleteSUBTITLES MOVIES FREE VIDEOSOctober 11, 2016 at 9:10 PMဆရာအပိုင်းလေး၃လုပ်ပါအုံReplyDeleteSUBTITLES MOVIES FREE VIDEOSOctober 22, 2016 at 6:29 AMDownload.bro ပြိးReplyDeletethuta soeOctober 22, 2016 at 9:33 AMမျှော်နေတာကြာပီဒီကားလေးကိုကြိုက်လို့အလုပ်မအားတဲ့ကြားကအချိန်ယူပီးတင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါReplyDeleteAung MyatOctober 24, 2016 at 2:53 PMThanks you wait next epReplyDeleteThein Tun OoOctober 25, 2016 at 10:17 AMcapicityက HDကို ၆၀၀MB ဆိုတော့ နဲနဲကြီးနေလို့ ၃၀၀MB လောက် လုပ်ပေးပါလား၊ReplyDeletelokopazDecember 21, 2016 at 7:46 AMတင်ပါဦးဗျို့ReplyDeletemichael rockDecember 23, 2016 at 9:56 AMအရမ်းမိုက်တယ် so cool အလုပ်မအားတဲ့ကြားကနေ တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးbroReplyDeleteseik monDecember 26, 2016 at 3:49 AMအကုန်တင်ပေးပါ။ youtube မှာတင်ချင်လို့။ReplyDeleteJoi mon MonFebruary 6, 2017 at 2:01 PMထပ်တင်းပေပါနော်ReplyDeleteMǿěĤťéŧ ŤĥũŶáĭñFebruary 7, 2017 at 3:55 AMကျန်တဲ့အပိုင်းတွေက ဆက်မတင်တော့ဘူးလား ဗျ ReplyDeleteaye thitsarMarch 12, 2017 at 4:37 AMထပ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း အခြား link ရှိရင်ပြောပြပေးပါလားReplyDeleteAdd commentLoad more...
Copyright © Myanmar Asian TV Channel | Powered by BloggerDesign by Ying Zhang | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com | Rap Beats